चुना स्वादको साथ चिकन सूप - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
चुना सुगन्धित कुखुराको सूप
सूप्स21 मिनेट2 व्यक्ति
"ओपिता!" मेरो भान्जीले आधा जिब्रोले टेबुलमा सूप राख्दा यसो भनिन्। सत्य यो हो कि यो एक मा सराहना गरिन्छ चिसो दिन वा वर्षाको कारण मलाई लाग्छ कि त्यहाँ धेरै प्रकारका सूपहरू छन् ... त्यसैले हामी एउटा तयार गर्न सक्छौं हरेक जाडो दिन!
कार्लोस अर्गुइआनो तिनीहरूलाई पनि धेरै मन पराउँछन् र सँधै कुराकानी गर्दछन् सूप को7गुण, त्यसैले जब उहाँले तिनीहरूलाई पढ्नुहुन्छ हामी उहाँलाई साथ दिन्छौं किनभने हामी तिनीहरूलाई पहिले नै हृदयबाट चिन्छौं।
सूपका सात गुणहरू छन्, यो किफायती छ, भोक हटाउनुहोस् अनि तिर्खा मेटिन्छ। तपाईलाई सुत्न र पाचन गराउँछ। यसले तपाईंलाई कहिल्यै रिस उठाउँदैन र यसले तपाईंलाई सधैं खुसी बनाउँछ।
यो भनाइ बिल्कुल सही छ, त्यसैले मलाई कुन गुणहरू सबैभन्दा बढी मन पर्छ मलाई थाहा छैन। मलाई के थाहा छ यो नुस्खा छ 100 kcal भन्दा कम। प्रति सेवा ... उत्तम, सही?
1 चुना सुगन्धित कुखुराको सूप
एक सूप १०० भन्दा कमको साथ तातो डिशको आनन्द लिइरहेको छ
रेसिपी प्रकार: सूपहरू
तयारी समय: 3M
खाना पकाउने समय: 18M
कुल समय: 21M
२ कुखुरा ड्रमस्टिकहरू
१ सानो आलु
1 लिटर पानी
हामी जांघ राम्रोसँग सफा गर्छौं, छाला, हड्डी र बोसो हटाउँछौं। हामीले पासामा काट्यौं।
हामी तरकारी राम्ररी सफा र धोएर।
लीक, प्याज, गाजर, आलु र अजवाइनलाई गिलासमा राख्नुहोस्, सबै समान आकारका खण्डहरूमा काट्नुहोस्। हामी प्रोग्रामिंग द्वारा काट्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 5।
पानी थप्नुहोस् र कुखुराको साथ गिलास भित्र टोकरी राख्नुहोस्। सिजन र समयमा सबै चीज पकाउनुहोस् Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १, बाँया पालो।
समय बितिसकेपछि, हामी एकल स्ट्रिपमा गिलासमा आधा चूनाको छाला थप्छौं र यसलाई छोड्छौं।3मिनेटस।
हामी छाला हटाउँछौं र चिकन टुक्राहरूसँग तातो सूप सेवा गर्छौं। हामी प्रत्येक कटोरामा थोरै धनिया छर्कन्छौं।
थप जानकारी - गिरावट स्वागत गर्न9उत्तम सूपहरू
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सलाद र तरकारीहरू, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १/२ घण्टा भन्दा कम, सूप र क्रिम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सूप र क्रिम » चुना सुगन्धित कुखुराको सूप
म र मेरो दुई र आधा वर्ष छोरी छोरी सूपहरू प्रेम गर्दछौं।
म निश्चित छु कि यो एक प्रयास गर्छु।
खैर, के तपाईंसँग कड पकाउनेहरूका लागि एक नुस्खा छ?
म तपाईंलाई यसको प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्दछ, तपाईं देख्नुहुनेछ कि यो कत्ति नरम छ!
आह ... वैसे पनि, माथिल्लो दायाँमा तपाईंसँग एक खोज इञ्जिन छ तपाईलाई यो व्यंजनहरू फेला पार्न सजिलो बनाउनको लागि।
नमस्कार मैले तपाईलाई भन्नु पर्दछ कि हामी तपाईको व्यंजनहरु लाई माया गर्छौं। पहिले मैले थर्मोमिक्स प्रयोग गर्दिन र अब प्रत्येक दिन प्रयोग गर्छु। मलाई कुखुराको चुना सूपको साथ शंका छ। के तपाईं एकै समयमा चाउचाउ थप्न सक्नुहुन्छ? यदि होइन भने मेरा छोरीहरूले यसलाई खानेछैनन्। धन्यवाद। अभिवादन
ईस्टरलाई जवाफ दिनुहोस्
म सँधै भन्छु कि सफलता सद्गुण, इरेन र तपाईंसँग साझा छ जो हामीलाई बिना शर्त पछ्याउँछन्।
तपाईंको प्रश्नको सन्दर्भमा, मैले कहिल्यै यो चाउचाउको साथ गरेको छैनँ, यो धेरै राम्रो विचार जस्तो देखिन्छ। केवल तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा यो हो कि तपाईंले थोरै पानी थप गर्नुपर्नेछ र प्याकेजमा संकेत गरिएको समयको लागि चाउचाउहरू पकाउनुपर्नेछ। त्यो हो, यदि यसले तपाईंलाई minutes मिनेट बताउँछ भने, त्यसपछि तपाईले सूप प्रोग्राम गर्नुहुन्छ जस्तो नुस्खाले भन्छ, र जब त्यहाँ minutes मिनेट बाँकी छ, तपाईं नूडल्स थप्नुहुन्छ।
आशा छ तपाईले मलाई नतिजा भन्नु भयो!
नमस्ते मायरा, म तपाईलाई परिणाम बताउनेछु र फेरि तपाईलाई बधाई दिन्छु किनभने तपाईलाई धन्यवाद छ मैले थर्मोमिक्स बेचेको छैन र अब मलाई यसको प्रयोग गर्न मन पर्छ र विशेष गरी मेरा छोरीहरू, जसलाई धेरै एलर्जी छ र यहाँ मैले धेरै व्यंजनहरू भेट्टाए कि खान सक्छौ तपाइँ धेरै धेरै धन्यवाद। चुम्बनहरू।
चिया, गाजर र गाढा चकलेट पुडिंग
प्याज गार्निश संग पोल्पेटोन